Tuesday March 13, 2018 - 20:40:14 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Nin wadaad ah oo degaan u shiikha ayaa mid kale oo kub ku siigaale ahi ku qabsaday iimaamnimadii. Iyagoo isla ildaran, caamadiina ku dhex wareertay ayaa meyd
Nin wadaad ah oo degaan u shiikha ayaa mid kale oo kub ku siigaale ahi ku qabsaday iimaamnimadii. Iyagoo isla ildaran, caamadiina ku dhex wareertay ayaa meyd la keenay si loogu tukado. Ninkii qasabka wadaadnimada ku rabay ayaa salaaddii jinaasada iimaamnimadeedii qasab ku galay. Ninkii shiikha degmada u ahaa faraha ayuu uga qaaday, waxayse horseedday ceeb iyo fashilaad. Wadaadkii Xaaji Qasab salaadii ayuu xidhay iyadoo meydkii hortiisa oo ku dhow yaallo. Markii uu ragcaddii hore takbiirtii iyo Faataxadii akhriyey ayuu rukuucay. Ceebbaa alla la maaggaye salaadda janaasadda lamana rukuuco, lamana sujuuddo. Iimaankii degmadda oo indho adaygiisa awalba la yaabbanaa baa ku yidhi rukuucdaye waa halkaad ku sujuuddaa. Waa runtii oo ma sujuuddi karo ileyn meydkiibaa halkii uu ku sujuuddi lahaa yaalla e. Waxaa ninkaa salaatul jinaasada ku rukuucay ka dhigin baarlamaanka iyo xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee AMISOM Muqdisho ku ilaaliso, UN-tuna mushahaarka siisaa markay yidhaahdeen DP World ayaanu Berbera ka mamnuucnay. Waxaa la yaab ah dhul iyaga laga mamnuucay oo aanay cag soo dhigi karin bay yidhaahdeen cid kale ayaanu ka mamnuucaynaa. Bal aan eegno halka ay ku sujuuddaan iyo sida ay ficil ugu roggaan sharcigii ay meel mariyeen.